तपाईले फाल्ने गरेको प्याजका बोक्रामा छन् यी पाँच फाइदा ! « Pen Nepal
तपाईले फाल्ने गरेको प्याजका बोक्रामा छन् यी पाँच फाइदा !
Published On : 11 October, 2020 2:29 pm By : पेननेपाल
काठमाडौं । थुप्रै अनुसन्धानले बताए अनुसार प्याजको बोक्रा एन्टिअक्सिडेन्ट, फाइबर, भिटामिन ए, सी, इ र मुटुलाई फाइदा पुर्याउने फ्लेभोनोइड्सले भरपुर हुन्छ । प्याजको बोक्राले रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्ने, मुटुलाई स्वस्थ राख्ने र रगतमा चिनिको स्तरलाई नियन्त्रणमा राख्ने काम गर्छ ।
५ . घाँटीको समस्यालाई ठिक गर्छः